မိုဘိုင်းဗီဒီယိုနှင့်ရှာဖွေမှု၏အနာဂတ်သည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 15, 2009 စနေနေ့, ဇူလိုင်လ 12, 2014 Douglas Karr
၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးမိုဘိုင်းစျေးကွက်အတွက်လည်းဂိမ်းလဲလှယ်ပေးသည်။ မျက်နှာပြင် နယ်သာလန်၌ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Duke Long က ငါ့ကိုဒီနည်းပညာအသစ်ဆီ link တစ်ခုပို့ပေးလိုက်တယ်။ Layar ကအဲဒါကိုမိုဘိုင်းတိုးပွားလာတဲ့အဖြစ်မှန် browser လို့ခေါ်တယ်။ ငါကအနာဂတ်လို့ခေါ်တယ်
Layar သည်လက်ကိုင်ဖုန်းတွင်အခမဲ့ application ဖြစ်ပြီးမိုဘိုင်းဖုန်း၏ကင်မရာမှတဆင့်အမှန်တကယ်အချိန်မှန်ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းအချက်အလက်များကိုပြသခြင်းဖြင့်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပြသသည်။
Layar ကို T-Mobile G1, HTC Magic နှင့်အခြားများအတွက်ရရှိနိုင်သည် အန်းဒရွိုက် ဖုန်းများ Android Market ကို နယ်သာလန်သည်။ အခြားတိုင်းပြည်များကိုနောက်မှထပ်ထည့်မည်။ အခြားနိုင်ငံများအတွက်စီစဉ်ထားသည့်သက်တမ်းတိုးမည့်ရက်များကိုယခုတိုင်မသိသေးပါ။
ဒီပို့စ်တွင်ပါသောဗွီဒီယိုကိုသင်မတွေ့ပါကပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ရှုရန်ကိုနှိပ်ပါ မိုဘိုင်းတိုးပွားအဖြစ်မှန်ဘရောက်ဇာ! ကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်ဤကဲ့သို့သောနည်းပညာ၏အံ့ဖွယ်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုပြိုင်ဆိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
Tags: android ဖုန်းလုပ်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန်g1htc မှော်တုမိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်စျေးကွက်တီ - မိုဘိုင်းt-mobile g-1
၎င်းသည်အားလုံးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောကုဒ်လော? er …အကြောင်းအရာ
Compendium Blogware မှနုတ်ထွက်သလား။
16:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 42
16:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 29
၎င်းသည် GPS နှင့်ဗီဒီယိုပေါင်းစပ်ထားသည့်အဒမ်ဖြစ်သည်။ တကယ်အတော်လေးမယုံနိုင်စရာ ထုတ်ကုန်နှင့်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်၎င်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ လူတွေရဲ့နာမည်ကိုမေ့ပစ်မယ့်အစား၊ ကျွန်တော့်ရဲ့လိပ်စာစာအုပ်ကိုပဲပြလိုက်ရုံပဲ။
16:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 27
ဒီဟာကိုအိုင်ဖုန်းမှာအလွယ်တကူတွေ့နိုင်တယ်။ ကင်မရာနှင့် GPS တို့ဖြင့်၎င်းတို့ကိုထည့်ထားသော Azimuth detector သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအက်ပလီကေးရှင်းအချို့အတွက်ပြုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။